Dzakanakisa nhau dzemimhanzi dzemwedzi waJune | Bezzia
Maria vazquez | 03/06/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 31/05/2021 19:49 | Nhau
Iyo yekurekodha indasitiri haitore zororo munaJune sekuwanda kwedu kwatinoda. Huwandu hwakanaka hwezvinhu zvemimhanzi zvichaburitswa mwedzi uno kubva zvatazviona isu tichisarudza izvo kwatiri ndezvepamusoro. Vatanhatu madisc emhando dzakasiyana, kuitira kuti kana iwe unofinhwa.
4 Hardcore kubva pamoyo - Joana Serrat
5 Kwete vamwari hapana masters - Marara
Muimbi uye mutambi Najwa Nimri anotsigira gumi echinyakare akatorwa kubva ku manzwiro repertoire eLatin America pane rake rinotevera dambarefu, Ama, maari aine kubatana kwakakosha kwaIsrael Fernández, Rusowsky, Pablo Alborán naÁlvaro Morte.
Yakabudiswa naJosh Tampico, Ama «iri chirongwa chakazvarwa zvakananga kubva pakusungwa«Anodaro Najwa Nimri. "Kuvharirwa uye kuoma mitezo kwehupenyu hwounyanzvi zvakandimanikidza kufungisisa nekutarisa kumashure." Panguva yekumira kwekumanikidzwa, muimbi akamuka mangwanani mamwe nerwiyo mumusoro wake: «Cute Doll». Rwiyo rwaakaimbirwa naamai vake sechirevo uye akange aramba akavanda mukona yendangariro yake. Mamwe mabheti emakorasi akanganwa kubva paudiki pamusoro. Zvishoma nezvishoma anowana tambo inobatanidza aya mazita: yavo ndewemhando, iyo Latin Latin bolero.
Aya ndiwo maitiro Ama anomuka, dambarefu rinoburitswa mangwana uye iro nhasi raunogona kuona a kutanga kuverera paFilin. Nhasi, chikuva cheSpanish chinongovhura chete Muñequita linda, naEster Exposito semutambi mukuru. Vhidhiyo inotungamirwa naBàrbara Farré uye inogadzirwa neCANADA.
Changephobia ndiye wechipiri solo LP nemunyori, mugadziri uye anokunda Grammy Rostam Batmanglij. Muunganidzwa wemakumi matatu nematatu madimikira chaiwo, asi zvinonzwika zvepasirese kune chero munhu uyo ​​pane imwe nguva yehupenyu akasangana nekukahadzika
Inotsanangurwa se "imwe yeakanyanya vagadziri vakuru ve pop uye indie-dombo wechizvarwa chake ”Rostam anosvika pari zvino ina dzenziyo dziri padambarefu raunogona kuteerera mangwana zvizere: Vana ava tavaziva, Vakuzungura, 4Runner uye Kubva kumashure kwekati.
Hardware ndiyo yechitatu solo albhamu na Billy Gibbons, mutungamiri wepamberi weZZ Top. Yakanyorwa paEscape Studio uye yakaburitswa naGibbons iye naMat Sorum naMike Fiorentino, inoumbwa nenziyo dzepakutanga gumi nembiri uye dzakanyorwa nevatatu, kunze kwekuti "Hei Mucheche, Que Paso", yakatanga kunyorwa neTexas Tornados.
Zvinhu zve dombo rakaoma dombo, nyika dombo, mutsva wave uye blues zvinoita kuti zviome kunongedza iri basa nyowani neGibbons. Iri basa rine yekupedzisira track, Desert yakakwira, hachisi chinhu chinotaurwa izwi chidimbu chinofambidzana neyakagwinya gitare iyo inomutsa ngano Graham Parsons, uyo kufa kwake makore 48 apfuura kwakaitika padhuze padyo neiyo Hardware yakanyorwa.
Hardcore kubva pamoyo - Joana Serrat
Hardcore kubva pamoyo, raJoana Serrat yechishanu album ichaburitswa inotevera June 11 pasi peRoose label, inongobvumidzwa chete kuGreat Canyon Records. Yakanyorwa paRedwood Studio muDenton, Texas, uko kwaakabatana nainjiniya uye mugadziri Ted Young, ine gumi gumi.
Mumwedzi ichangopfuura Joana Serrat akaburitsa sepikicha "Mifananidzo", "Iwe uneni kwese kwandinoenda" uye achangoburwa "Madhimoni". Magazini ine mukurumbira yeBritish Uncut yakapa albamendi 9 pa10, kusanganisira iyo muchikamu chayo che "Zvakazarurwa". Iwe unoda kuzvinzwa here?
Kwete vamwari hapana masters - Marara
Musi waChikumi 11 chimwe chedu chakatanhamara mimhanzi novelties ichaonawo mwenje: Kwete vamwari hapana masters, iyo Damba rechinomwe album Garbage. Yakagadzirwa naMarara naBilly Bush, mafupa eiri radhi akagadzirwa muzhizha ra2018 murenje rePalm Springs, uko quartet yakapedza vhiki mbiri ichivandudza, kuyedza uye kunzwa nziyo.
Shirley Manson: “Ichi ndicho chinyorwa chedu chechinomwe, chine huwandu hwakakosha hwesimba rakakanganisa DNA yezviri mariri. Kunaka kunomwe, marwadzo manomwe uye zvivi zvinomwe zvinouraya. "Yaive nzira yedu yekuedza kunzwisisa kupenga kwenyika uye nyonganiso dzinoshamisa dzatakazviwana tiri."
El Maroon yechinomwe album ichaburitswa muna Chikumi 11, Jordi. Zita rekuremekedzwa iro bhendi reAmerica rinotungamirwa naAdam Levine rinopa mutero kune aimbove maneja, Jordan Feldstein, akafa muna2017 nekuda kwekuumbika kwemapapu.
Yakabudiswa naJ J Kash, iyo album ichava ne14 nziyo Izvo zvatave kutonzwa Ndangariro, Hapana rudo uye Akanaka mhosho naMegan Thee Stallion. Nekudaro, uku hakuzove iko chete kubatana kuri paalbum. Vanyori vakaita saAnuel AA, Tainy, Stevie Nicks, Juice WRLD naJason Derulo vachange varipo mubasa rechinomwe revaimbi.
Iwe uri kumirira kuburitswa kwechero yeaya maalbhamu? Ndeipi yenyaya idzi dzemimhanzi dzaungade kunzwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Dzakanakisa nhau dzemimhanzi dzemwedzi waJune
Maitiro ekubvisa ropa pazvipfeko